Izindaba - Ukutholwa Kwensimbi Kwemikhiqizo Yokudla: Kuphephile futhi Kuvalwe
Izinhlelo zokutholwa kwensimbi zaqala ukwenziwa e-UK ngo-1948, futhi manje sezisetshenziswa kabanzi embonini yokupakisha ukudla.
Isithunzi somkhiqizo wakho siyikho konke kulo mhlaba oxhumeke kakhulu, ogcwele umkhiqizo. Ukutshalwa kwezimali kumishini yokupakisha ekhiqiza amaphakheji aphephile futhi avaliwe kungenza umehluko. Enye indlela yokuqinisekisa ubuqotho bomkhiqizo wakho ukufaka ukutholwa kwensimbi kulayini wakho wokupakisha.
Zisebenza kanjani izinhlelo zokuthola izinsimbi?
Ngokuya nge-Quality Assurance & Food Safety Magazine, yonke imishini yensimbi engasebenzi ngensimbi yenzelwe ngendlela efanayo eyisisekelo:
Amakhoyili amathathu alinywe ngokufana ncamashi nohlaka olungasensimbi.
Ikhoyili yesikhungo ixhunywe ku-transmitter yerediyo ephezulu kakhulu.
Amakhoyili amabili athola ukudluliswa ahlala ngapha nangapha kwekhoyili yesikhungo.
Ngoba amakhoyili amabili angaphandle ayafana futhi ayibanga elifanayo ngqo ukusuka enkabeni, athola isiginali efanayo futhi akhiqize amandla afanayo, alinganiselayo wokukhipha amandla.
Ngakho-ke lapho inhlayiya yensimbi idlula ohlelweni:
Inkambu yemvamisa ephezulu iphazamisekile ngaphansi kwekhoyili eyodwa, iguqula i-voltage futhi iphazamisa ibhalansi.
Okukhiphayo okukhiphayo kusuka ku-zero, kukhiqiza isignali exwayisa uhlelo ebukhoneni bensimbi.
Ngokuya ngemininingwane yohlelo, inqubo yokwenqaba ivame ukusetshenziswa, kube nomphumela omuhle wokususwa kwamaphesenti ayi-100 ensimbi kanye nenani eliphansi lomkhiqizo othengiswayo.
Kungani umsebenzi wokupakisha kufanele utshale imali ekutholeni insimbi?
Ukuvikela umkhiqizo wakho emakethe kungenye yemisebenzi ebaluleke kakhulu eyenziwa ngumenzi wokudla. Kepha konke ukutshalwa kwezimali ukusungula idumela lekhwalithi yomkhiqizo kungalahleka uma kwenzeka kukhunjulwa ukuphepha okukodwa.
Ukuthuthukisa nokugcina uhlelo lokuhlola olusebenzayo, oluqinisekisiwe akuseyona inketho yabaprosesa. Ukutholwa kwensimbi kuyindlela ephumelelayo futhi engabizi kakhulu yokuvikela amakhasimende akho nomkhiqizo wakho. Ngenkathi intengo, ukulethwa nokunye ukucatshangelwa kwezebhizinisi kubalulekile, ukusebenza kwezobuchwepheshe kufanele kube yinto esemqoka lapho kuhlolwa umtshina wensimbi ongawethemba ngedumela lomkhiqizo wakho.
Ngingayikhetha kanjani imishini efanele yokuthola insimbi yendawo yami yokupakisha?
Qala ngokuhlola indawo yakho yokuhlola. Ingabe imanzi noma yomile? Yini ukwehluka kwezinga lokushisa? Ukukhetha umtshina wensimbi oyilungele imvelo yakho yokusebenza kubalulekile.
Ukungena kwamanzi ezingxenyeni zikagesi kungenye yezimbangela ezivame kakhulu zokwehluleka ukuthola umtshina wensimbi. Uma kunerejimeni yokugeza phansi esitshalweni, ingabe ingcindezi ephezulu noma ephansi? Isilinganiso se-IP65 washdown sisho ukuthi umtshina wensimbi ungamelana nokugeza kwengcindezi ephansi ngamanzi okushisa asendaweni. Isilinganiso se-IP69K sisho ukushisa okuphezulu okuqhubekayo nokucindezela. Kepha qaphela: lezi zilinganiso zivame ukuzibika. Isithunzi somkhiqizi embonini ngokwazi ukumelana ne-washdown kungaba inkomba enhle.
Ingabe ukugeza phansi kufaka ama-caustic agents? Uma kunjalo, kufanele kubhekwe ngokucophelela i-alloy ethile yensimbi engenasici esetshenziselwa icala lomtshina wensimbi. Uhlobo lwe-316L lumelana kakhulu nalawa ma-caustic agents.
Ezindaweni ezomile, ingabe ukuphela komtshina wensimbi kudwetshiwe? Ukubeka indawo edwetshiwe ekusakazweni komkhiqizo kungagcina kungcolise imikhiqizo yakho ngama-chips kapende.
Futhi cabanga ukumelana nomthelela. Izembozo zepulasitiki nolwelwesi kungaphansi kokugqoka noma ukuthinta ukungena. Isikrini sokubonisa esinamandla nekhibhodi kugwema isikhathi sokuphumula nezindleko zokufaka ezinye izingxenye.
Uhlelo lokutholwa kwensimbi kufanele luzwele kangakanani?
Izidingo zokuzwela kwensimbi zivame ukuhluka ngokuya ngokusebenza. Isibonelo, umsebenzi oyinhloko womtshina wensimbi kungaba ukuvikela isiqeshana sokhiye, njenge-sheeter noma i-slicer. Inhloso bekungaba ukuqeda insimbi enkulu ngokwanele ukulimaza imishini.
Kwenye ingxenye yomugqa, kuzodingeka izinga elihlukile lokuzwela ukuhlola ukuhamba komkhiqizo ngobuningi. Futhi ngoba ukuhlolwa kokugcina kwephakeji kufanele kube okufuna kakhulu, ukuzwela okuphezulu kakhulu kungadingeka ukuvikela umkhiqizo wakho ngaphambi kokuthi ufike esigcawini.
Iqembu lokulawula ikhwalithi lesitshalo sakho kufanele libe nezinhloso ezithile zobuzwe bezinto ezingcolisayo zensimbi, ezingezona izimbi, nezingagqwali (uhlobo 316) zomsebenzi ngamunye wokuhlola. Lezi zinhloso kufanele zithunyelwe kumenzi wensimbi yensimbi ukuze bakwazi ukukhetha imishini efanele yohlelo ngalunye. Qiniseka ukuthi uzibekela imigomo enengqondo futhi ongayifinyelela.
Ungaqala kanjani ngokutholwa kwensimbi kokupakisha kokudla
I-GAOGE ineminyaka eminingi yesipiliyoni isebenzisa izinhlelo ezihlanganiswe ngokuphelele zokupakisha ukudla ngokutholwa kwensimbi.
Ama-Metal Detectors awusizo ekutholeni izinto eziyinsimbi nezingafakwa kumkhiqizo wephakethe eliqediwe, lisetshenziswa kakhulu kokudla, amathoyizi, imithi, indwangu kanye nezinye izimboni.
● Uhlelo lokulawula isikrini sokusebenziseka kalula
● Ukuthola ngokuzenzakalela isimo sokusebenza, esivumelana nokugcinwa
● Konke Ukucushwa Kwensimbi Engagqwali futhi kuhlanzeke kahle.
● Vumelana nezinga le-GMP ne-HACCP
● I-Auto-Reject mechanism ne-alarm light auto-stop iyakhethwa
Umtshina Wensimbi Wama-Aluminium Foil Packages
Ngokufanelekile ukuthola insimbi engenansimbi nengagqwali emaphaketheni e-aluminium foil, afana noshokoledi, amazambane amazambane, isoseji yobisi oluyimpuphu, imikhiqizo eqoshiwe njll. Izimpahla.
● Ukucubungula kwedijithali kusiginali etholakele ene-microcomputer esezingeni eliphakeme ukuthuthukisa ukuthola ukunemba.
● Ukuzwela kungashintsha ngokukhululeka futhi kalula
● Ukucindezela okunamandla komphumela womkhiqizo wemikhiqizo yokudla yasemanzini, ukudla okufriziwe nokudla okufakwe emanzini anosawoti